China Icebo lokucoca ulwelo lwegqabi lediskhi eneenkwenkwezi zokwenza imveliso kunye neFektri IHanke
Ucingo umnatha ibhanti 5-heddle mes ...
Wedge wire screen lokucoca sl ...
Ukujikeleza umnatha lokucoca BOPP f ...
Isixhobo sokucoca esintyintyiweyo ...
Ezincamathelayo filter element micr ...
Icebo lokucoca idiski yokuhluza idiski ngenkwenkwezi ye weld
1. Umjelo wamanzi amdaka oza kuphathwa ungena kwicandelo lokucoca ulwelo emanzini;
2. Amanzi aqukuqela evela ngaphandle kwiqela lediski yecebo lokucoca ukuya ngaphakathi kwiqela lediski yecebo lokucoca ulwelo;
3. Xa amanzi egqitha ngejelo elenziwe ngeembambo ezimile okwe ringi, amasuntswana amakhulu kunobude beembambo ayafunyanwa aze agcinwe kwisithuba esenziwe ziimbambo ezigosogoso kunye nomsantsa ophakathi kweqela lokucoca idiski kunye neqokobhe;
4. Emva kokuhluza, amanzi acocekileyo angena kwidiski engathi yiringi ebunjiweyo kwaye akhutshelwe ngaphandle.
Icebo lokucoca ulwelo eliveliswe ngu-Anping Hanke Filter Technology Co, Ltd.yinto efanelekileyo yokuhluza ukuhlamba, ukuhlamba kunye nokomisa oomatshini (ekubhekiswa kubo abathathu kukodwa).
Izinto eziphambili zecebo lokucoca ulwelo lwediski enziwe ngentsimbi eshayinayo engenanto sintered mesh. Ukuchaneka kokucoca 1-200μm, ubukhulu yi-200-3000mm, kwaye isakhiwo sediski yokuhluza inodidi kunye nolwahlulo lohlobo.
Iimpawu zecwecwe lokucoca ulwelo: ukuqina okuhle, amandla aphezulu, umjikelo omude wokubuyisela, ukucoca ngokulula, indibano elula, njl.
Icebo lokucoca ulwelo lisetyenziswa kwizinto ezintathu-in-nye nezixhobo ezibini-nye zokomisa umgubo kunye nokuhluza, ishishini lamachiza, kunye nokutya kwishishini lokuxuba amayeza, endaweni yemveliso yelaphu lemveli.
Isixhobo sokucoca sediski yokuhluza kukuqonda indibaniselwano yokucoca umhlaba kunye nokuhluza okunzulu kusetyenziswa icwecwe lokucoca elicinezelweyo. Itekhnoloji yayo engundoqo yidiski yokuhluza, equlathe iseti yeediski ezinepolypropylene enamacala amabini enemigca eyahlukeneyo. Iidiski ezimbini ezikufutshane zibekwe phezulu, kwaye imiphetho ye-groove kubuso obufutshane yenza iminqamlezo emininzi. Ezi ndawo zinqumlayo zenza inani elikhulu leemngxunya kunye neepaseji ezingaqhelekanga, ezihlala zincipha zisuka ngaphandle ziye ngaphakathi. Xa kuhluzwa, ezi ndinyana zikhokelela kukuhamba kwamanzi okuxokozelayo, oku kuthi ekugqibeleni kubangele ukungcola emanzini kunqandwe kwiindlela ezahlukeneyo. Ukuba isitaki sediski sokucoca sibeke phezulu kwaye safakwa kwisakhelo esingundoqo secebo lokucoca ulwelo, iyunithi yokuhluza engenanto evulekileyo yangaphandle nangaphakathi iya kwenziwa phantsi koxinzelelo lwentwasahlobo namanzi angenayo.
Iimpawu zokusebenza kwecwecwe lokucoca ulwelo:
1. ukuhluza ngokufanelekileyo
2. Iimodyuli eziqhelekileyo, ukugcina indawo:
3.Ukusebenza okuzenzekelayo ngokupheleleyo, ukuphuma kwamanzi okuqhubekayo:
4. Ubomi obude
5. Umgangatho ophezulu kunye nokugcinwa okuphantsi
Umzekelo UD (mm) Icebo lokucoca ulwelo R (μm) Icebo lokucoca ulwelo ulwakhiwo
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo sintered umnatha
Ifoto2: Ulwakhiwo lwesahlulo esinye: ipleyiti yokuhluza ibotshwe okanye yadityaniswa kwipleyiti yenkxaso, emva koko yadityaniswa kwiflangePicture3:
Ulwakhiwo olunye, icwecwe lokucoca ulicwangcise ngokuthe ngqo kunye nembasa, kwaye ke nge welding esisangqa
I-DF-1200-R 1200 1.13M2
I-DF-2750-R 2750 5.94M2
I-DF-2800-R 2800 6.15M2
Egqithileyo Yobhedu umnatha yobhedu ephothiweyo kwisitokhwe
Okulandelayo: Icebo lokucoca ulwelo lobisi lokucoca ulwelo kunye ne-Clamp / welding / Threaded / flanged Pipe Fittings
Iqhosha lokucoca amaqhosha
Icebo lokucoca idisk
Icebo lokucoca ulwelo kwi-extruder
Icebo lokucoca disc
Icebo lokucoca ulwelo lweLeaf
Iplastikhi yePlastikhi yePlastikhi yokuCoca
Icebo lokucoca ulwelo ngegqabi lePolymer
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca ulwelo
Icebo lokucoca i-Ss
Icebo lokucoca ulwelo ngeentsimbi
Wocingo wocingo lokucoca Disc
Ityhubhu ityhubhu inqindi ityhubhu lokucoca ulwelo kunye ...
Wedge ucingo screen lokucoca ulwelo umbhobho lokucoca esebenzayo ...
Ezincomekayo lokucoca ulwelo microporous esongiweyo filte ...
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca ikhandlela elicofiweyo